जेठ पाँचसम्म लक-डाउन थप्ने सरकारको निर्णय, लक-डाउन लम्बिए संगै काठमाण्डौमा पनि लागु भयो नयाँ नियम !! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Lockdown News/जेठ पाँचसम्म लक-डाउन थप्ने सरकारको निर्णय, लक-डाउन लम्बिए संगै काठमाण्डौमा पनि लागु भयो नयाँ नियम !!
काठमाडौँ – सरकारले जारी लक-डाउनलाई जेठ पाँच गतेसम्म लम्ब्या`उने निर्णय गरेको छ । बुधबार बिहान बसेको मन्त्रि परिषदको बैठकले जेठ पाँच गतेसम्म लक-डाउन थप्ने निर्णय गरेको हो । पछिल्लो पटक सरकारले घोषणा गरेको लक-डाउनको समय वैशाख २५ गते सकिँदैछ ।
सरकारले आन्तरिक र अन्त`र्राष्ट्रिय उडान मे १५ अर्थात् जेठ २ गतेसम्म बन्द गर्ने यस अगाडि नै निर्णय गरिसकेको छ। सरकारले पछिल्लोपटक थपेको १० दिने लकडाउन बिहीबार अर्थात वैशाख २५ गते सकिदै छ। संक्र`मणको जोखिम कायमै रहेको विश्लेषण गर्दै मंग`लबार बसेको कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) संक्र`मण रो`क`थाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समितिले लक-डाउन थप्‍न सुझाव दिएको थियो।
मंगलबार बालुवाटारमा बसेको कोरोना संक्र`मण रोकथाम तथा निय`न्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति बैठकमा संक्र`मण शून्यमा झार्ने विषयमा छलफल भएको थियो । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिको २३ औं बैठकमा कृषि र उद्योग क्षेत्रका कामलाई मापदण्ड अनुसार निरन्तरता दिँदै कोरोना नियन्त्रणमा अहिले भएका सबै प्रयासलाई यथावत राख्दै संक्र`मण शून्यमा झार्ने विषयमा छलफल भएको थियो।
कोरोनाभाइरसको संक्र`मण फैलिन नदिन सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि लकडाउन गरेको थियो। पछिल्लो पटक थपिएको लकडाउनको अवधि भोलि सकिँदै थियो। लकडाउनकै अवधिमा नेपालमा कोरोनाको संक्र`मण भने बढिरहेको छ। लकडाउन सुरू हुँदा नेपालमा २ जनामात्र कोरोना संक्रमित थिए भने अहिले ८२ जना पुगेका छन्।त्यस्तै दैनिक उपभोग्य सामग्री र स्वास्थ्य उपचारसम्बन्धी जोडिएका सवारीबाहेक अब उपत्यकामा ‘नो इन्ट्री’ गरिएको छ ।
यसअघि पास बनाएपछि निर्वाधरुपमा सवारी भित्रने गरेको थियो । अब भने पासबाहक गाडीलाई समेत धमाधम फर्काउन थालिएको छ । महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रमुख प्रहरी नायब महा`निरीक्षक विश्वराज पोखरेलले पास भएकालाई पनि अब अत्यावश्यक बाहेक प्रवेश रोकिएको बताउनुभयो । “दैनिक उपभोग्य सामग्रीसँग र स्वास्थ्य उपचारसँग जोडिएका सवारी आउन पाउँछन्, त्यसबाहेक पास लिएर आए पनि सवारी भित्रिन पूर्ण निशेष छ ।
”ब सवारी पास बनाइएर उपत्यका जान्छु भन्ने सोच छ । याद गर्नुहोस् ! पास बनाउँदैमा अब उपत्यका छिर्न पाउनुहुन्न । नागढुङ्गा, फरपिङ, मुड्खु, जगाती, जरसिङपौवा या अर्काे कुनै नाकाबाटै फर्कनु पर्ने पनि हुनसक्छ । दुःख मात्रै पाउन सक्ने भएकाले बेलैमा ध्यान पु¥याउनुहोला ?विभिन्न नाकाबाट अहिले उपत्यका एक हजार ५०० हाराहारीमा सवारी भित्रिने गरेका छन् ।
त्यसमा झण्डै ४०० सवारी पास बोकेर विभिन्न काममा आउने गरेको प्रहरीको अभिलेख छ । दैनिक उपभोग्य सामग्री ल्याउने सवारीसमेत बढेको छ । ती गाडीमा चालक सहचालक गरी दुईदेखि तीनजना आउने गरेका छन् । त्यसरी हेर्दा झण्डै चार हजार हाराहारीमा मानिस दैनिक उपत्यका भित्रिने गरेका छन् । अत्या`वश्यक सावारीमा आएकाहरु सामान अनलोड गरेर बाहिरिने भए पनि अन्य व्यक्तिहरु बाहिरिने गर्दैनन् । त्यसैले पनि कडाइ गरिएको हो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्यो- “अब लकडाउन गर्ने योजना छैन”